မတျ 26, 2020 – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကျွန်မသမီးက အခု အသက် ၁၅ နှစ်ရှိပါပြီ။ ရာသီမလာသေးလို့ပါ။ မိန်းကလေးတွေက ဘယ်အရွယ်မှာ အပျိုဖော်ဝင်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေ အပျိုစဖြစ်တဲ့အရွယ်ဟာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် အသက်...
ရေရှည် ညဆိုင်းအလုပ်လုပ်ရသော အမျိုးသားများ ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေနိုင်
ကိုထက် နံနက်တစ်နာရီနဲ့ နှစ်နာရီကြားအပါအ၀င် ညဉ့်နက်တဲ့အထိ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ ခြောက်လအကြာမှာ နေ့ဆိုင်းအလုပ်လုပ်ရသူတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာနဲ့ အဆုတ်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေ နှစ်ဆကျော်ပိုများကြောင်း Quebec တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။ ညဆိုင်းအလုပ်လုပ်ရတာနဲ့ ကင်ဆာရောဂါအကြား ဆက်စပ်မှုဟာ ဟော်မုန်းစနစ်အပေါ် အခြေခံတယ်လို့ ထင်ရကြောင်း...